Shire Jaamac - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Shire Jaamac Axmed)
شيري جامع أحمد
Gacanka ka gaystay
Shire Jaamac Axmed (Af carabi: شيري جامع أحمد) waa luuqadyahankii Soomaaliyeed ee allifay Far Soomaaliga aan maanta u naqaan B,T,J ee la hirgalayay sanadkii 1972.
Farta Shire Jaamac Axmed uu aliffay waxaa doortay Guddiga Af Soomalaiga ee xisbiigii wadanka ka talinayay sanadkii 1972 waxaana laga doortay 18 far ama hab oo tartamayay. Gudiga shaqadiisa waxay bilabatay sanadkii 1960.
Dabayaqadii 1960yadii, Shire iyo dhowr luqadyahan oo kale, ayaa Gudiga Af Soomaaliga, Gudigan oo loo xilsaaray go'aan iyo xal u helida amuurta afka, wuxuu waydiiyay inay soo qoraan xuruufta ama habka ku haboon ee loo hirgalin karo luqada Af Soomaaliga oo markaa aan laheyn af qoran oo leh xauruuf iyo halbeeg. Shire iyo luqadyaqaanadii kale waxay soo hordhigeen Gudiga Af Soomaaliga mid walba iyo fartoodii. Gudigan oo lahaa awooda go'aanka kama dambaysta ah.
3 Waxbarashadii Shire
3.1 Dugsiga Sare Jamaal Cabdinasir ee Muqdisho
4 Shaqadii Shire
5 Ol Olihi Af Soomaaliga
6 Daabacaadihii Shire Jaamac
7 Qoraalo Kale
Ummada Soomaaliyeed waligeed afka dhextaalka u ah ee ka dhexeeyay ilaa inta taariikhda Soomaali la hayo wuxuu ahaa Af Soomaali. Murtida iyo baahsanaanta Af Soomaaliga wuxuu marag ka yahay soo jireennimada afka.
Markii afka la qoray sahal ayay noqotay ururinta iyo kobcinta afka. Jaamacadii ummada iyo meel walba oo wax lagu qoro si fudud ayuu uga hirgalay Af Soomaali.
Shire wuxuu ku dhashay gobolka [Galgaduud]. Wuxuu ku barbaaray magaalooyinka Caabudwaaq iyo Dhuusamareeb oo ka mid ah magaalooyinka waawayn ee gobolka.
Sanadkii 1940, da' shan jir isaga oo ah ayaa dugsi Quraan la geeyay halkaas. Ilaa 1945 ayuu barashada diinka sii waday mudo shan sano ka dib uu Kabiir ka noqday dugsigii.
Sanado ka dib, Jaamac Axmed, waa Shire aabihiise, wuxuu reerkii u raray caasimada Xamar. Sanadkii 1951 ilaa 1954 kulyada tacliin sare oo ay gacanta ku hayaa barayaal iyo arday Jaamacada Al Ashar ayuu galay xiligaas oo uu ka miro keenay waxbarashadaas.
1955 wuxuu Shire ka mid noqday arday Masar deeq waxbarasho u aaday. Luqada Carabiga iyo taariikhda Islaamka ayuu sidii Shire caadada u ahayd heer tacliin sare ah u bartay.
Dugsiga Sare Jamaal Cabdinasir ee Muqdisho
Dugsigan oo afka casharka uu ahaa luqada Carabiga ayaa waxaa taageeri jiray Jaamacada Al Ashar iyo Dawladda Masar. Shire Jaamac dugsigaan oo reer Muqdisho ay u yaqaaneen Dugsiga Sare ee Allahi ayuu arday ka ahaa halkaas oo uu deeq waxbarasho labo jeer Masar uga aaday.
Waxaa xigay safar uu Ruuskha ku aaday in kasta oo uu markii hore doorbidadyay inuu jaamacada McGill oo ku taal magaalada Montreal, Canada.
Shire Jaamac wuxuu soo qabtay xilal kala duwan. Isaga oo noqday madaxii ugu horeeyay Akadeemiyada Dhaqanka ee Qaranka Soomaaliyeed, ayaa hadana wuxuu ka mid ahaa luqadyanahaddii soo bandhigay 18 hab oo ay u doodayeen in loo doorto Far Soomaaliga.
Shire wuxuu ka mid ahaa Guddigii Afka Soomaaliga, jagada Xoghaye, ee dowladii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ay u xilsaartay baarista iyo dejinta afka. Gudiga Afka Soomaaliga oo ka koobnaa xubno aqoonyahano Soomaaliyeed ayaa wuxuu ka qabtay jagooyin sare.
Dowladii labaad ee qaran ayaa kala dirtay Gudigii isaga oo aan wali wax g'aan ah aan ka gaarin. Dowladii Kacaanka ayaa dib u abaabushay 1972 Guddigii Af Soomaaliga. Sanad guuradii labaad ee Dawladda Kacaanka ayaa go'aan madaxwayne loogu dhawaaqay qorista Af Soomaaliga. Shire fartiisii ayaa la doortay. Xuruufta laatiinka ayuu isticmaalay Shire. Dadka inta badan waxay isla dhexmarayeen in waxaan Af-Carabi aheyn in bilaa diin ay tahay. Ha yeeshee danta iyo kharashka Dawladda ama maaliyada loo qoondeeyay.
Dabcan awooda dawlada laanta Xooga Dalka ku qabsadey xoog dalka aqoon yahanadii soo bandhigey qoraalka afka iyo wakhtigii lagu lumiyey in tuso dawladii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre in somalidu leedahay af qoran gumeystayaashiina baabi iyeen in la fidiyo ama somali wada barato. Madaxwayne Aadan Cabdulle Cusmaan(Aadan Cadde) iyo Cabdirashiid Cali Sharmaarke 2 warbixin ayuu guddiga u diyaariyay laakiin Gollaha Shacabka ayaa cod laga waayay. Waribxintii dambe hay'ada UNICEF ayaa maalgelisay.
Af kaasoo ahaa afkii ay ku qoraayeen gabayadii Axmed Gurey iyo kuwii la midka ahaa ee somali u hal gamay, iyagoo ka jidhihdicoodey degaanka iyo taariikhda ay halbowle u noqdeen samaroon(gadabuursi)waxaa la adeegsadey awood Kacaan. Shire oo ahaa ardeydii markii calanka la qaatey waxbarashada u aadey wadanka Masar ayaa laga door bidey aqoon yahanadii iyo waayeelkii iyagu Masar 20 sano ka hor kasoo quruuruxiyey waxaa Shire hada la shir yimid ee loo shaaximey kuna doodayey in uu yahay ninkii u horeeyey ee Af Somali qorey sida biiraale bille ah uu qoristiisa bilaabay 1965. Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal iyo Shire Jaamac Axmed fartii BTJ ayay buugaag ku qoraan 1961, 1965; siday u soo kala horeeyaan.
October 10, 1972 waxana lagu dhawaaqey in Afka somaligu hada la qorey somalidii oo gumeysigii dib ula hadhey iyo afkii Carabiga oo aad uga hilgalay Soomaaliya diinta awgeed iyo xoriyad la'aanta qarniyo ku habsatey aad ayay ugu riyaaqeen sidii loo higeliyeyna waa la wada ogaa ilaahadana afkaas laatinka ah ayaa %70 dadku u haystaan inuu yahay af Somaligii saxda ahaa.
Ol Olihi Af Soomaaliga
Af Soomaaliga qoristiisi ka dib waxaa howlgalay bulsho aad u balaaran adeega qorista iyo akhirinta Af Soomaaliga waxaa gaarsiiyay degmo walba iyo beel walba. Ugu horeyntii 1972 ilaa 1974 magaalooyinka dadkii degenaa ayaa fursad balaaran loo siiyay barashada farta. Ka hor qoristii Afka, 3% oo kaliya ayaa bulshada wax qori kartay. Fartii BTJ ee uu allifay Shire Jaamac ayaa la hirgaliyay.
Ol olihii horumainta miyiga 28,000 oo macalin ayaa 18ka gobol ee wadanka u shaqo tagtay. Ardaydii dugsiga sare ee wadanka fasaladii ayaa si biririf ah looga joojiyay si ay u soo gutaan xilkaas muhiimka ah. Tarbuunka ayaa guutooyin bulshada rayidka ka mid ka ambabaxday si ay walaalahooda Soomaaliyeed u baraan Afka.
Sanadkii 1986 baaris la sameeyay dhanka qorista iyo akhrinta, 55% ayaa bariista lagu ogaaday in bulshada Soomaaliyeed waxna ay koraan akhrina karaan.
Daabacaadihii Shire Jaamac
Iftiinka Aqoonta -Biiladle Af Soomaali - Jaraa'id
Aqoonta Aas Aasiga - Buug Laylin Barashada Hoose
Waxbarashada Soomaaliya iyo Caawin Xeerarka - Loo diyaariyay US Peace Corps
Halgankii Nolosha, Madbacada Qaranka, Muqdisho 1974
Gabayo, Maahmaah, iyo Sheekooyin Yaryar, Daabacida Shire Jaamac Axmed, Muqadisho, 1965
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shire_Jaamac&oldid=204114"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Luuliyo 2020, marka ee eheed 00:00.